ဒါဟာလူသိများသည် ဒီဇယ်လုံးလေးများ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအပေါ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. အထူးသဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမလုံလောက်သည့်ဝေးလံသောဒေသများ၌ဤဒီဇယ်လုံးတောင့်စက်အမျိုးအစားသည်ဒေသများစွာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်ဟူသောအချက်များကိုဖော်ပြသည်။.
ယေဘူယျအားဖြင့်, ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိုသေးငယ်သောပြားချပ်ချပ်လုံးလေးများစက်များတွင်အသုံးပြုသည်. လူအများပိုမိုများပြားလာသောကြောင့်သူတို့၏မိသားစုအတွက်အပူပေးသော pellet စက်ကိုအသုံးပြုရန်ငတ်မွတ်နေကြသည်, ထို့ကြောင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ပါသည့်အတောင့်စက်များ၏လိုအပ်ချက်မှာလည်းယနေ့အချိန်တွင်တိုးတက်နေသည်.
1. ပိုမိုကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သော
ဒီဇယ်အလုံးသေးစက်များ၏ဈေးနှုန်းသည်နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာအရမဟုတ်ပါ. တကယ်တော့, များစွာသောအိမ်ပိုင်ရှင်များသည်ယခုစက်ရုံများကိုမတတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. ဒီဇယ်လုံးလုံးစက်ရုံများကိုအသေးစားအသုံးပြုမှုမှာတိုးများလာနေသည်. သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်တစ်ခုမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဒီဇယ်လုံးလေးပြုလုပ်သည့်စက်ကိုဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်. ဤအရာသည်သင်အကောင်းဆုံးစက်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်သင့်အားလိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းကိုလည်းသေချာစေသည်. သင်ဝယ်ယူနိုင်သောဒီဇယ်လုံးလေးပြုလုပ်သည့်စက်သည်သင်၏တောင့်တင်းလိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်. Amisy သည်တောင့်စက်များပေါ်တွင်သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းအားလုံးကိုနားလည်လာလိမ့်မည်.
စျေးကွက်တွင်လုံးလေးများအမျိုးအစားများစွာရှိသည်: Ring Die အတောင့်ကြိတ်စက်နှင့် Flat သေ pellet စက်. Ring die pellet mills သည်စက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုသောအရာဖြစ်ပြီးပြားချပ်ချပ်လုံးသည်ကြိတ်ခွဲစက်ထက်စျေးကြီးသည်. အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အိမ်သုံးအတွက်, ပြားချပ်ချပ်လုံးလေးများသည်ဈေးသက်သာပြီးသင့်လျော်သောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်မောင်းနှင်သည့်အသေခံအလုံးလေးစက်နှစ်မျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်: လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်ဒီဇယ်မောင်းနှင်မှု. နှစ် ဦး စလုံးအိမ်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်. ဒီမှာဒီဇယ်လုံးလေးကိုရွေးချယ်ဖို့သော့ချက်အချက်တစ်ခု. ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်သည်, အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွင်လျှပ်စစ်မီးပြတ်လပ်မှုကြောင့်လုံးလေးများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်. နှင့်ဒီဇယ်နေရာတိုင်းနီးပါးရရန်အလွန်လွယ်ကူသည်.
ဒီဇယ်လုံးလုံးစက်နှင့်အတူ, လုံးလေးများလုပ်သည့်လုပ်ငန်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်. နောက်ကျော 1970 ရဲ့ pelletizing စက်များတွင်တိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဓိကအားအသုံးပြုခဲ့ကြသည်, သို့သော်, အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ, စက်ရုံများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချခြင်းကိုတိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းများသာမကအိမ်အပူပေးရာတွင်လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့်သစ်သားလုံးလေးများကိုလည်းဒီဇယ်လုံးလေးများစက်များဖြင့်စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။. ယေဘုယျအားဖြင့်ဇီဝလောင်စာဆီသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အလေးအနက်ထားသည်. အသေးစားလုံးလေးများထုတ်လုပ်သူအများစုသည်တောင့်တင်းသည့်ဒီဇယ်စက်ကိုရွေးချယ်သည့်လေ့ရှိသည်.
1. ကတွန်း ဒီဇယ်အင်ဂျင်.
2. roller နှင့် die တို့ကိုသတ္တုစပ်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုစပ်များနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်, ၎င်းသည်ဒီအမာရွတ်အစိတ်အပိုင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးချိုးရန်မလွယ်ကူစေသည်.
3. ပစ္စည်းများရရန်လွယ်ကူသည်: ပြောင်းဖူး, ဂျုံ, ပဲပုပ်, မြက်ပင်, ကျောက်စိမ်း, ကောက်ရိုး, စပါးခွံနှင့်.
4. ကြက်၊ ဘဲများအတွက်အစာတောင့်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်, ကြက်သားလို, ဘဲ, ယုန်, ဝက်, စသည်တို့.
5. ပြောင်းလဲပစ်စက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သေသည်, သင်တစ် ဦး အစာကျွေးတောင့်စက်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောချင်းနှင့်အတူ feed ကိုလုံးလေးများလုပ်နိုင်ပါတယ်.
6. pelletizing အတွက်အပူသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့လျှောက်လွှာမလိုအပ်ပါ. မည်သည့် Binder ထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ, က mash feed ကို granules သို့တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်.